Funda ngokuRhweba nge-Forex njengePro-Isikhokelo esipheleleyo sikaJanuwari 2022!
Funda ngokuRhweba nge-Forex ngo-2021-Isikhokelo sabaQalayo esipheleleyo!
Ngaphandle kokuba yinto entsha entsha kubathengi abathengisayo, urhwebo lwe-Intanethi olwenziweyo kwi-intanethi luye lwaduma ngokuthe ngcembe kule minyaka imbalwa idlulileyo. Ngenxa yoku, kukho inani elininzi labarhwebi kunye nababoneleli ngeenkonzo abafumanekayo kwizandla zakho ukuze bafunde ukurhweba kwangaphambili.
Ngaphambi kokuthatha isigqibo sokuba yeyiphi i-broker oyikhethileyo, kuya kufuneka kuqala ufunde ukurhweba kwangaphambili ukusuka phezulu kuye ezantsi.
Ngale nto engqondweni, sidibanise isikhokelo kuzo zonke izinto ze-forex; Oku kubandakanya yonke into evela kwiintlobo zeemali onokuzithengisa, ukunyusa, ii-oda zeemarike, izixhobo zokulawula ingozi, kunye nokunye!
Funda ngeNtengiso ye-Forex-Esisiseko
Ngomvuzo ophakathi we-5 yezigidi zeedola ngosuku, i-forex yeyona ntengiso inkulu yezemali emhlabeni. Eyona ndawo yentengiso yazo zonke iimali, kwihlabathi liphela. Iimali ziya kuthengiswa kwiimarike ze-forex, kuninzi njengamasheya athengiswa kwi-stock exchange.
Umahluko omncinci phakathi kweeklasi ezimbini zeasethi kukuba ngexesha leseshoni yokurhweba kwangaphambili, iimali ziya kuthengiswa kwikhawuntara- kanti izitokhwe ziya kuthengiswa kunaniselwano oluphakathi. Iimali zithengiswa ngeeseshoni ezine eziphambili ze-forex, zezi; iseshoni yaseLondon, iseshoni yaseNew York, Iseshoni yaseTokyo kunye neseshoni yaseSydney.
Ngokukodwa xa iiseshoni zaseLondon naseNew York zidibana (zihlala iiyure ezimbalwa ngosuku), ubuninzi beentengiso ze-forex zihlala ziqhutywa kwezi seshoni zimbini. Imirhumo yentengiselwano ihlala iphantsi xa kuthengiswa ngaphakathi kweLondon naseNew York ixesha elingaphaya, njengoko kulapho imarike iya kuba yeyona inamanzi.
Elona nyuko liphantsi isibini semali esinokuthi siliguqule kwixabiso laziwa njenge 'pip'. Amanqanaba otshintshiselwano kwimarike ye-Forex ngokubanzi ahanjiswa ngeendawo ezi-4 zedesimali, indawo yokugqibela yedesimali 'yipip'. Olona khetho luphambili kulo mthetho kuxa izibini zenziwe iiyen zaseJapan.
Zonke zinikezelwe ngababini, iimali zinokwahlulwa ngokulula zibe ziindidi ezintathu eziphambili;
Izibini ezibini: Esona sibini silulwelo apha mhlawumbi yi-EUR / USD. Iipara zemali ezinkulu ezisisiseko zizezemali eziza kuthengiswa ngokuchasene ne-USD (eyiyo imali yokugcina umhlaba). Umzekelo wezinye izibini kubandakanya; I-GBP / i-USD kunye ne-USD / JPY.
Izibini ezincinci: Ngamanye amaxesha abizwa ngokuba ngamanqamlezo omnqamlezo, ezi zibini zibonelela ngemali encinci xa uthengisa, njengoko bengenzi urhwebo ngokuchasene ne-USD (umzekelo i-GBP / EUR okanye i-CHF / EUR)
Izibini ezingaqhelekanga: Unxulunyaniswe nemali ezivela kuphuhliso loqoqosho lwehlabathi njengeTurkey (iTurkey Lira), uMzantsi Afrika (iRandi yoMzantsi Afrika) kunye neBrazil (iBrazil eyiyo). Ngamanye amaxesha izibini ezingaqhelekanga zinokubhekiswa njengezibini ezincinci
Ekugqibeleni, i-US Dollar idlala indima ebaluleke kakhulu kwindawo yokurhweba ngaphambili. Ezi zibini ziza namanqanaba asezantsi okuhlawula amatyala kunye nokungazinzi kwaye zihlala zisasazeka kakhulu.
Funda ukuThengiswa kweeNgxowa-mali kunye noMzekelo
Umgaqo ophambili wokurhweba kwangaphambili kukuqikelela kwicala elizayo lesibini semali. Ukuba uqikelela ngokuchanekileyo, wenza imali. Ukuba awukwenzi-okuchaseneyo kuyenzeka.
Masicinge ukuba uthengisa nge-GBP / EUR
Ixabiso langoku lezibini ngama-1.1760
Ucinga ukuba i-GBP izonyuka ngexabiso ngaphezulu kwe-EUR, ke ubeke 'i-oda yokuthenga'
Iiyure ezimbalwa kamva, i-GBP / i-EUR inyuke nge-1.2%
Uyonwabile ngenzuzo yakho, ke uthatha isigqibo sokufaka imali ngokufaka 'iodolo yokuthengisa'
Njengoku kungasentla, wenze inzuzo nge-1.2% ngokuqikelela ukuba ixabiso le-GBP / EUR liya kuba Nyusa. Ukuba ucinga ukuba okuchaseneyo kuya kwenzeka, kuya kufuneka ubeke 'i-odolo yokuthengisa'.
Nokuba yeyiphi na indlela, ubuhle be-intanethi ye-intanethi yokurhweba kukuba unokubeka ezakho izibonda. Umzekelo, ukuba ubufake i-500 yeedola kolu rhwebo lungentla, ubuya kwenza ingeniso eyi- $ 6. Ukuba ubufumene i-5,000 yeedola- inzuzo yakho ibinokuma kwi- $ 60.
Funda ngeNtengiso ye-Forex: Ukusasazeka
Yonke intengiso enye ine sasaza yenkcazo ethile, i-forex ayifani. Kwabo abangaziyo, ukusasaza umahluko phakathi kwexabiso elifunwayo (baya kuthengisa kangakanani) kunye nexabiso lokubhida (uthengela malini). Umzekelo, ukuba ixabiso lokuthenga ngu-2.3100, kwaye ixabiso lokuthengisa ngu-2.3106, ukusasazeka apha kuya kuba ngu-6 iipipi.
Ukuba usebenzisa isiseko semali esifunwa kakhulu (umzekelo i-USD), uya kufumanisa ukuba i-forex isasazeka (kuloo ntengiselwano ithile) iya kuhlala incinci kunaleyo ingasetyenziswa ngokufuthi.
Eli lityala lokubonelela kunye nemfuno. Khumbula ukuba kulo mzekelo umthengisi ekubhekiswa kuye akazukufuna ukuhlawulisa ukusasazeka okuphezulu, kuba akufuneki babenangxaki kwaphela xa bethengisa (kulo mzekelo) iidola abazithengileyo.
Zama okusemandleni akho ukunqanda ukuthengisa okanye ukuthenga usebenzisa iimali ezinesidingo esisezantsi, kuba ziya kuhlala zikubiza kakhulu ngenxa yokusasazeka okuphezulu. Ngokubanzi, okungaqhelekanga (ngokufuna igama elingcono) imali, kokukhona ukusasazeka kuya kuba ngaphezulu. Kwelinye icala, ukusetyenziswa kwemali ngokubanzi, kokukhona kuya kusasazeka i-forex.
Abatyali mali bexesha langaphambili ngamanye amaxesha ngamanye amaxesha bathengisa ngeeyunithi zemali ezi-7, ke ukuba ukusasazeka kungama- .0005 (ngamanye amagama iipipsi ezi-5), inokubiza iiyunithi ezingama-500 kuyo nayiphi na imali othengisayo kuyo.
Umrhwebi ngamnye we-forex uya kuba nezixhobo zokurhweba- kungenjalo kubhekiswa kuzo njengezalathi zobugcisa. Oku kunokufumaneka kwiqonga 'lendawo yokurhweba'. Ngokwesiqhelo, abathengisi be-forex baya kusebenzisa izikhombisi zobuchwephesha, ukugquma kwitshathi, kunye neenkcukacha-manani ukuze bancede benze ukhetho olungcono.
Ezinye zezixhobo ezifanelekileyo ezisetyenziswa ngabarhwebi be-forex, kwaye abo kufuneka bajonge zezi zilandelayo;
MACD: Intsingiselo 'yokuhamba komndilili wokudibana phakathi', esi sixhobo siza kubona izinto ezintsha ezisekwe kwimilinganiselo yokuhamba. Iindlela apho imali ikwi-forex.
Iibhendi zeBollinger: Esi salathisi sobuchwephesha sinokukunceda ekuboneni icala oya kulo umkhwa oya kuhamba kuwo. Isalathi-nkqubela siya kubonisa umjelo ojikeleze ukuhamba kwexabiso leeasethi. Iitshaneli zihambelana nomndilili ohambahambayo kunye nokwahluka okumiselweyo.
I-ADX (Umndilili weeNkcazo eziMiselweyo): Ukumisela indlela eyomelele ngayo le meko, unokusebenzisa i-ADX. Imikhwa iya kuhlala iphakamile okanye iphantsi, isalathiso esingalunganga somboniso siya kuboniswa njenge-DI, kwaye into elungileyo iya kuba + DI.
I-RSI (Isalathiso Samandla Ahlobene): Lo msinga oscillator uza kulinganisa utshintsho kumaxabiso okuhamba kunye nesantya sokunyuka kwamaxabiso esitokhwe.
Ichimoku Cloud: Ngokwesiqhelo kubizwa ngokuba yi-Ichimoku Kinki Hyo, esi sisalathiso esinezinto ezininzi esinika imiqondiso yokuthengisa, ulwazi lwendlela yokujonga, ukuvavanya amandla, zombini ukuxhathisa kunye nenkxaso. Ngokuthi krwaqu, unokufumana ukuqonda malunga nokuhamba, kunye neempawu ezinokubakho ngaphakathi kwazo.
Stochastic: Lo msinga oscillator kukuthenga okuhle kwaye uthengise isalathiso, ujonga imbali yexabiso lesibini le-forex, ukulungiselela ukuqhubeka kokuya kwicala.
I-SAR (Ukuma ngokuBuyela umva kunye nokuGuqula): Ukugxila kumaxabiso aguqukayo exesha elifutshane kunceda uthathe isigqibo sokuba uza kubeka phi ii-odolo zokumisa.
Ingcali kwimarike ye-forex, iMetaTrader4 (MT4Iqonga linokuqhuba ukurhweba okuphambili, eligcina uhlalutyo lobuchwephesha (kuhlalutya imeko yamaxabiso) kwaye iyahambelana ngokupheleleyo neerobhothi zorhwebo.
Umlingani we-MetaTrader 5 (MT5) uya kukuvumela ukuba wenze imisebenzi yorhwebo lobugcisa, kunye nohlalutyo kwiimarike zorhwebo lwe-forex. IMT5 ekuqaleni yayidalelwa ukuba inike abarhwebi bayo ukufikelela kwizitokhwe, ikamva kunye neeCFD.
Kwinqaku elisecaleni, ngokungafaniyo nendawo ye-forex, Urhwebo lweCFD ayibandakanyi ukuthenga okanye ukuthengisa naziphi na iiasethi ezinokubakho.
Luyintoni urhwebo lokuxhamla kwi-Forex?
Umgaqo osisiseko wokunyusa urhwebo lwe-forex kukukuvumela ukuba urhwebe ngesixa esikhulu semali kunokuba unayo kwiakhawunti yakho. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba oku kunokukhawulezisa ilahleko yakho, kunye nokuphumelela kwezorhwebo.
Uluvo lulonke kukuba uyakwazi ukuphinda-phinda isibonda sakho ngento ethile.
Ke, khawufane ucinge ukuba unemali eseleyo ye- $ 1,000- xa usebenzisa ubungakanani be-10x emva koko uya kukwazi ukurhweba nge- $ 10,000.
Ukucacisa amandla okuqhubela phambili:
Masithi unqwenela ukubeka iodolo kwi-GBP / USD kuba uziva unyuselwa iponti yaseBritane.
Ixabiso langoku lezibini ngama-1.2623
Unayo i-500 yeedola kwiakhawunti yakho ye-forex yokuthengisa, emva koko ufake isicelo se-20x
'I-odolo yakho yokuthenga' ngoku ixabisa i-10,000, 500 yeedola ($ 20 x XNUMX)
Masithi kwiiyure ezimbalwa kamva, ixabiso le-GBP / USD lenyuke nge-2%, ngenxa yoko, uthatha isigqibo sokutshixa kwiinzuzo zakho kwaye uphume kweso sikhundla.
Kwiimeko eziqhelekileyo, iipesenti ezi-2 kwi-500 yezigxina ziya kubangela ukufumana i-10 yeedola.
Nangona kunjalo, ngenxa yokuba urhwebo lwakho lwalunamandla okusebenzisa i-20x, oku kuthetha ukuba wenze i $ 200 ($ 10.00 x 20)
Ukubaluleka koVavanyo lwangempela loRhwebo
Njengomtyali mali we newbie, kufuneka ulumke ngakumbi xa kuziwa eqongeni othengisa nalo, ngenxa yomngcipheko ongachazekiyo onokuthi ubandakanye.
Icandelo elibalulekileyo lokukhetha umrhwebi lenza isixa esibalulekileyo sophando ngaphambi kokuba uthathe isigqibo.
Enye yeendlela zokwenza oku kukufunda uphononongo kwiqonga labarhwebi, ukukunika ukuqonda kumava abanye babarhwebi kwindawo ekurhweba kuyo ekubhekiswa kuyo. Unokujonga kwakhona uphononongo lwabarhwebi njengeyethu engenamkhethe kwaye isekwe kuphando olwenziwe ziingcali. Okungakumbi kamva.
Ukukhetha uMboneleli weNtengiso ye-Forex-Yintoni ekufuneka uyiqwalasele
Kwimarike yomthengisi we-forex ekhuphisana kakhulu, uya kufumanisa ukuba kukho amakhulu amaqonga onokukhetha kuwo, ngenani elikhulu elinikezela abathengisi base-UK iinkonzo zabo ngokucofa iqhosha.
Ukwenza izinto zibe lula kuwe, siye saqulunqa uluhlu lwezinto oza kuzijonga xa usenza isigqibo sakho.
Umthetho kunye noMmiselo
Indawo elungileyo onokuthi uqale ngayo kukujonga ukuba umrhwebi ocinga ngaye unesaphulelo esisemthethweni ukuze athathe abarhwebi base-UK. Kunyanzelekile kubarhwebi Sekelwe e-UK ubenelayisensi yokuthengisa ye-FCA (yeNdlela yokuziPhatha ngokwezeMali).
Ukuba umthengisi unelayisensi yi-FCA, unokukhuseleka kulwazi lokuba iqonga liqhuba ishishini lalo ngokomthetho wase-UK kunye ne-EU.
Ngale nto ithethwayo, kukho inani labangengabo i-FCA forex brokers esebenzayo kwisithuba esibonelela ngeendlela zokukhusela kunye nokhuseleko. Kungenxa yokuba bakhetha ukufumana iphepha-mvume kwamanye amaqonga elinye-njengeCySEC (iSipro) kunye ne-ASIC (Australia).
Uninzi lwabathengisi be-forex kwi-intanethi ngoku baqinisekisa ukuba imali eyahlukileyo yinto eqhelekileyo. Kananjalo, le yinto onokufuna ukuyijonga xa ukhetha iqonga lakho lomthengisi.
Ukubeka ngokulula, ukuba umrhwebi wakho we-forex ubonelela ngemali eyahluliweyo, oku kuthetha ukuba nayiphi na imali oyirholayo iya kugcinwa ngokukhuselekileyo kude kwiimali umrhwebi wakho azisebenzisela ukusebenza kweshishini.
Ngalo lonke ixesha jonga imigaqo yomrhwebi othile, njengoko amaqonga aya kwahluka kwindlela asebenza ngayo, kwaye kwimeko yokuchaphazeleka; iimali zakho zisenokungakhuselwa nge-100%.
Iidipozithi kunye nokukhetha ukurhoxa
Xa kuziwa ekufakeni imali kwiakhawunti yakho yomthengisi we-forex okanye ekurhoxiseni inzuzo yakho, amava akho kufuneka akhawuleze, alula, kwaye abonakale.
Ngelixa amaqonga amaninzi aya kuyicwangcisa idiphozithi yakho kwangoko, kuhlala kungumbono olungileyo ukuphinda ujonge ukuba umrhwebi, okanye indlela yokuhlawula, ayizukuthatha thuba lide.
Yazi ukuba abanye oomrhwebi baya kukuhlawulisa umrhumo wokungasebenzi. Ihlala intlawulo encinci njengeeponti / iidola / i-euro ezimbalwa, ke soloko ufunda imigaqo kunye neemeko eziqhotyoshelweyo.
Olunye lolona khetho luqhelekileyo lokuhlawula / lokufaka luyafumaneka kubandakanya; I-Visa, Mastercard, ii-e-wallets (ezinjengePaypal), iAmerican Express, kunye nokudluliselwa kwebhanki.
INkonzo yabaThengi / iNkxaso
Inkxaso yabathengi yinxalenye ebalulekileyo yokuba namava amahle kuyo nayiphi na inkampani. Ngelixa uninzi lwabarhwebi be forex banikezela ngenkonzo enkulu yokuxhasa abathengi, kuhlala kucetyiswa ukuba wenze uphando ngaphambi kokwenza isigqibo sakho sokugqibela.
Abanye abathengisi baya kukubonelela ngokubonisana simahla kwi-Intanethi, okona kulungileyo kuya kukunika inkxaso kuwo onke amanyathelo endlela.
Izinketho zenkxaso yabathengi ziya kwahluka kodwa ukhetho luhlala lubandakanya; ingxoxo ephilayo, i-imeyile, umnxeba, kunye nemidiya yoluntu. Amaqonga amaninzi abonelela ngoncedo lweyure ezingama-24 ngazo naziphi na iingxaki okanye imibuzo onokuba unayo.
IiKhomishini ezisezantsi kunye neMali yokuRhweba
Le iyazichaza, kodwa iifizi zokurhweba ngomrhumo zangaphambili ziyahluka kakhulu. Nangona kunjalo, fI-ees ngokwesiqhelo iza 'njengekhomishini yorhwebo' -iyipesenti ephindaphindwe ngesibonda sakho.
Umzekelo, masicinge ukuba indawo yokurhweba ngaphambili ihlawulisa i-0.2% kwaye ubungakanani beodolo yakho yi- $ 3,000. Oku kuthetha ukuba uya kuhlawula ikhomishini ye- $ 6. Ukuba uvale indawo yakho xa iodolo ixabisa i-3,500 7 yeedola- ikhomishini yakho inokuma kwi- $ XNUMX.
Njengoko besesitshilo ngaphambili, kufuneka uqiniseke ukuba umthengisi wakho omkhethileyo unikezela ngokusasazeka okuphantsi. Kule meko, jolisa kwiisayithi zokurhweba kwangaphambili ezinikezela ukusasazeka okungaphantsi kwe-1 pip kwizibini eziphambili njenge-EUR / USD. Okukuphela kwento eyahlukileyo kulo mthetho kukuba usebenzisa umrhwebi ongenakhomishini, njengendalo, uya kufumana ukuba ukusasazeka kuphakame kancinci.
Ezinye Iingongoma Zokuqwalasela
Izibini ezininzi ze-Forex: Kwakhona, ukhetho oluninzi lubangcono ngakumbi ngakumbi xa kusiziwa kwizixhobo ezinokuthengiswa. Ngelixa abanye abathengisi banokuba neebhangqa ezimbalwa, abanye banokubonelela nge-surplus ye-100. Ungakujonga oku ngaphambi kokuba ubhalise.
Iintlobo ngeentlobo zezalathi: Ezi manani kunye nokugqunywa kuya kukunceda ekwenzeni izigqibo ezingcono zokurhweba, ngenxa yokuqonda abakunika kona. Kananjalo, qiniseka ukuba umrhwebi wakho omkhethileyo ubonelela ngemfumba yesalathiso sobuchwephesha kunye nezixhobo eziphambili zokufunda kwitshathi.
Ekugqibeleni, kuhlala kucetyiswa ukuba ujonge imigaqo kunye neemeko, iifizi, izibalo kunye nokuphononongwa ngaphambi kokuba ungene.
Abarhwebi abaGqibeleleyo baFunda ukuRhweba ngeNgxowa-mali ngaphakathi kwe-2021
Ukuba usaqala kwihlabathi le yorhwebo ntengiso, kunyanzelekile ukuba usebenzise umrhwebi ofanele umtyali mali we newbie. Ukuthatha zonke ezi metric zikhankanyiweyo ngaphambili-ngezantsi uya kufumana uluhlu lwabarhwebi abaphambili kwi-Intanethi kwi2021 ukuze bafunde Forex yorhwebo.
1. I-AVATrade-Kumiselwe i-Forex Broker ngokuSasazeka okuQinisekileyo
Eyasungulwa ngo-2006 kwaye ilawulwa kumazwekazi amane, lo broker unikezela abathengisi ngaphezu kweebhanki zemali ezingama-50, ukusasazeka okunamandla kunye nobubanzi obuhle bezinye iiklasi zee-asethi ukuba uceba ukuhlukana.
Amanye amaqonga orhwebo akhona kunye nalo broker zii-MT4, MT5, kunye nesoftware yokuthengisa iwebhu. I-AVAtrade ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokurhweba kunye neempawu eziluncedo, kubandakanya ukunyusa ukuya kuthi ga kwi-400: 1 kwi-forex, kunye nokusasazeka kokhuphiswano olusezantsi njengeepipi ze0.8.
Umrhwebi ukwabonelela ngeempawu zolawulo lomngcipheko ezinje nge-stop-loss kunye nee-odolo zenzuzo, ke oku kuya kukunceda uvavanye nayiphi na ingozi ebandakanyekayo.
Funda ngeNtengiso ye-Forex -Indlela yokuQalisa
Ke ukhethe umthengisi we-forex ukuba unomdla wokungena kunye, kodwa awazi ukuba ungaqala ngaphi? Senze uluhlu olulula lwemiyalelo yenyathelo ngenyathelo yokufumana urhwebo ngemizuzu.
Inyathelo 1: Uyivula njani iakhawunti
Nje ukuba ukhethe iqonga lakho olithandayo, ungatyelela iphepha lewebhu kwaye uqalise inkqubo yokuvula iakhawunti yakho. Njengakwiakhawunti ezininzi ezintsha okanye nayiphi na into oyifunayo xa ufuna ukubhalisela, kuyakufuneka ufake ulwazi lomntu ngamnye ukuze ibhola iqengqeleke.
Eli candelo lihle kakhulu; Uyakuhlala ufuna ukufaka igama lakho elipheleleyo, umhla wokuzalwa, iinkcukacha zonxibelelwano (zihlala zinenombolo yeselfowuni kunye ne-imeyile), idilesi yokuhlala, kule meko imeko yakho yerhafu.
Kananjalo nenqanaba lakho lerhafu, kuyakufuneka ubonelele umrhwebi wakho wokukhetha kunye nolunye ulwazi, ngokunxulumene nemali yakho.
Ngokubanzi, ulwazi lwezezimali olufunekayo kuwe luya kuba lixabiso lakho elipheleleyo, umvuzo wakho oqhelekileyo, kunye nenqanaba lomsebenzi. Umrhwebi we-forex uya kuludinga olu lwazi ukuze akubonelele ngeakhawunti yemali yokwenyani, kunye neemveliso ezifanelekileyo, ezilungiselelwe imeko yakho yezemali.
Inyathelo 2: Amava oRhwebo lwangaphambili
Apha kuya kufuneka uphendule imibuzo ethile (ihlala ikhetha izinto ezininzi), ngokusekwe kumava okuthengisa angaphambili.
Ngokusisiseko, abarhwebi be-forex abalawulwayo kuya kufuneka baqiniseke ukuba uyazi into oyenzayo. Ukurhweba nge-Forex kwenziwa ngezixhobo zemali eziphuhliswe kakhulu, ke ukuba namava angaphambili kule ndawo yokurhweba kubaluleke kakhulu.
Unokufumanisa ukuba awukwazi ukurhweba ngomda xa usilela ukuphendula eminye imibuzo ngokuchanekileyo.
Inyathelo 3: Ukuqinisekiswa kwesazisi-KYC
Okulandelayo, kuyakufuneka ungqine ukuba ungulowo uthi unguye. Ngokwesiqhelo ibizwa ngokuba yi-KYC, okanye Yazi umThengi waKho, eqinisekisa isazisi sakho yeyona nto ibalulekileyo ekubhaliseni kuye nawuphi na umrhwebi.
Ngelixa ii-brokers zihlala zicela iikopi ezifundwe ngamaxwebhu xa zibonisa ubungqina bakho; kuxhomekeke kwimigaqo yendawo, abanye abathengi bazakuqinisekisa isazisi sakho ngevidiyo. Kuzo zombini iimeko, kuya kufuneka uqiniseke ukuba unencwadana yakho yokundwendwela, okanye isazisi silungile.
Kwimeko yokuqinisekiswa kwevidiyo, umboneleli wangaphandle oqinisekiswe ngokupheleleyo (kunye neqabane le-EBH) uya kuyenza ividiyo, kwiqonga eliqinisekisiweyo ekupheleni kwenkqubo yakho yobhaliso. Ukuqinisekiswa kwevidiyo kuyakufuna umqhubi, kwaye ke kuyakubakho iiyure ezithile xa ifumaneka, ihlala iyiyure yesiqhelo yeshishini.
Ubungqina bedilesi zihlala zifuna uxwebhu olunye, kuluhlu lwamaxwebhu amkelweyo. Ngokwesiqhelo, ikopi yesitetimenti sebhanki okanye ityala elisebenzisekayo (umbane, amanzi, igesi okanye ityala lomnxeba) liya kwanela xa uqinisekisa idilesi yakho.
Nje ukuba isazisi sakho siqinisekiswe ukuba unayo iakhawunti ngokusemthethweni kwaye ungaqala inyathelo elilandelayo, okongeza imali kwiakhawunti yakho yomthengisi we forex.
Amaxesha okusingathwa kwe-KYC ayahluka, kodwa ukuba uziva ngathi ulinde ixesha elide ukuba uqinisekiswe, ungahlala uqhakamshelana neqela lenkxaso yabathengi, kwaye baya kukuvuyela ukukugxothela oku.
Ngokukhawuleza ukuba isazisi sakho siqinisekisiwe ngumthengisi we-forex, ungafaka imali kwiakhawunti yakho.
Ukuba unendlela ethile yokuhlawula ekufuneka uyisebenzisile, kuya kufuneka ujonge ukuba umrhwebi othile uyayamkela na loo ndlela yokuhlawula, nanjengoko eyahluka.
Ukuba intlawulo oyikhethileyo yidebhithi / ikhadi lekhredithi, amathuba okuba idipozithi yakho iya kufakwa kwiakhawunti yakho kwangoko. Ngokudluliselwa kwebhanki, umzekelo, inokuba ziintsuku ezimbalwa ngaphambi kokuba idiphozithi yakho icinywe.
Iindlela ezimbalwa zokuhlawula zihlala zamkelwe zezi; Ityala / amakhadi etyala, ugqithiselo lwebhanki kunye ne-e-wallet.
Ngokuqinisekileyo kuyacetyiswa ukuba ngaphambi kokuba uqale urhwebe, unokuqonda okusisiseko kwendlela esebenza ngayo, kunye nendlela yokungena nokuphuma kwizikhundla.
Ngaphambi kokuba wenze intengiselwano yokwenyani, indlela elungileyo yokulungiselela urhwebo lwakho lokuqala lwe-forex ukuqala ngeakhawunti yedemo.
Le yindlela esengqiqweni yokuphepha umngcipheko omkhulu wokuziqhelanisa nokusebenzisa iimali zakho zokwenyani, kwaye ikwanceda ukuba uziqhelanise neqonga xa kufikwa kwinto yokwenyani.
Ngoku unokwenza i-odolo ye-forex, ngokusisiseko umthetho we-broker yakho.
Nje ukuba ukwinqanaba apho uvule khona iakhawunti, uqinisekisile isazisi sakho kwaye wongeza imali ngokufaka imali kuyo. -Ngoku, lixesha lokuba uqale ukurhweba ngemali yokwenyani Kuluvo olulungileyo ukuqala ngezibonda ezincinci kakhulu, njengoko kusengqiqweni ukufumana intloko yakho ijikeleze indlela esebenza ngayo yonke into ngaphambi kokuthatha nayiphi na ingozi enkulu onokuzisola ngayo kamva.
Ngenxa yotshintsho lwe-forex kule minyaka imbalwa idlulileyo, indlela yokuphila ezimeleyo ngokwemali ngoku iyafumaneka kuye nawuphi na umrhwebi.
Ngethemba, emva kokufunda esi sikhokelo, uya kuba nokuqonda okungcono ngakumbi koomatshini bangaphakathi bendlela i-forex esebenza ngayo, njengoko olu lwazi luya kuqinisekisa ukuba ufumana umsebenzi wakho wokurhweba kunyawo lwasekunene!
Iyintoni inkcazo ye-forex?
I-Forex-ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba yi-'FX 'ngamafutshane, imele' utshintshiselwano lwangaphandle '. Kwindlela yayo esisiseko, i-forex yinkqubo yokuthenga kunye nokuthengisa ngababini bemali ngokujonga kwakhona ukwenza inzuzo
Yeyiphi eyona pair ibalaseleyo yokuthengisa?
Akukho sayizi inye ilingana nayo yonke impendulo koku, kuba konke kuxhomekeke kukhetho lomntu. Ngale nto uyithethileyo, uyacetyiswa ukuba unamathele kwizibini ezikhulu xa uqala, kuba ezi ziza ngamanqanaba asezantsi okuguquguquka xa kuthelekiswa nabantwana kunye nezinto ezingafunekiyo.
Ngaba ndingarhweba nge-forex simahla
Ukuba ufuna ukurhweba nge-forex simahla, kuya kufuneka uvule iakhawunti yedemo kunye nomrhwebi omthembileyo. Oku kuyakuvumela ukuba urhwebe ngemali yedemo.
Yintoni ukuthenga nokuthengisa i-odolo kwi-forex?
Ukuze uthengise i-forex, kuya kufuneka ubeke ukuthenga okanye ukuthengisa iodolo kumthengisi okhethiweyo. Ukuba ubeka i-oda yokuthenga, oku kuthetha ukuba ucinga ukuba ixabiso lezinga lotshintshiselwano liza kunyuka. Ukuba ucinga ukuba izinga lokutshintshiselana liza kuhla, kufuneka ubeke umyalelo wokuthengisa.
Isebenza njani ipenny stock stock?
Kuya kufuneka kuqala ufumane umthengisi onokufikelela kwiimarike ze-OTC. Ke, wakuba usifumene isitokhwe se penny onqwenela ukutyala imali kuso, umrhwebi uya kuzama ukufumana izabelo egameni lakho.
Kutheni i-penny stocks i-volatile?
Izitokhwe zePenny ziyaguquguquka kuba zihlala zixhaswa ziinkampani ezincinci. Oku kuthetha ukuba iodolo enye enkulu inokuchaphazela ixabiso lesitokhwe ngendlela enkulu.
Leliphi elona xabiso lincinci endinokurhweba ngalo nge-forex?
Oku kuyokwahluka kumrhwebi kumrhwebi, ke jonga oku ngaphambi kokuba uqalise. Kwiimeko ezininzi, kuyakufuneka ufake phakathi kwe- $ 100- $ 200 ukuvula iakhawunti.